रौतहटमा भयो दुनियाँ च’कित हुने घ’टना ! – Life Nepali
रौतहटमा भयो दुनियाँ च’कित हुने घ’टना !
रौतहटमा भयो दुनियाँ च’कित हुने घ’टना [भिडियोसहित]
काठमाडौ । सप्तरी जिल्लाको बलान बिहुल गा.पा. वडा नं. ०६ रौतहटमा दुनियाँ सबै च’कित हुने घ’टना भएको छ । त्यहाँ रहेको श्री रौतहट ठाकुर बाबा (बड्कि) पोखरीमा एउटा अदभुत घ’टना भएको छ । त्यसै गाउँको एउटी १४ वर्षकी बालिका बड्की पोखरीको पानीमा कमलको फुल टिप्न जाँदा डुब्न पुगिन् । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
उनी डुबेको ७ घण्टापछि बल्ल फेला परिन् । तर दुनियाँ च’कित हुने दृष्य देखियो । उनी ७ घण्टापछि जिउदै पोखरीबाट बाहिर निस्किइन् । वरिपरि खोजी र उद्धारमा खटिएका सबै मानिस च’कित बने । उनीहरुले लगातार ७ घण्टा खोज्दा समेत पोखरीमा उनी भेटिइन् । पोखरीको गहिराई निक्कै भएका कारण कतै दविएको भन्दै आशा नै हराएको थियो । तर सयौ स्थानीयकै आँखा अगाडी उनी पोखरीबाट नै बाहिर निस्किइन् । डुबेको र कराएको देख्नेहरुपनि छन् ।
यो घटनाले अहिले त्यहाँ चमत्कार भएको आभास भएको छ । यसै घटनालाई माननिय गोबिन्द न्यौपाने र गा.पा. अध्यक्ष दयान्न्द गोईत पनि पुग्नु भएको थियो ।*** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
Previous खुसिको खबर : नेपालमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने मिति तोकियो !
Next भर्खरै ओलि सरकारले गर्यो यति ठूलो निर्णय ! छायो सबैतिर खुसियाली !